एकै दिन तोलामा २ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, अमेरिकी डलरको भाउ भने बढ्यो — Sanchar Kendra
१भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष बमले भने- खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन्, सम्मान गराैं
२आफ्ना बरिष्ठ नेता समातिएपछि गगन थापाले गरे यस्तो कडा ट्वीट, ओलीलाई दिए कडा चेतवानी
३पक्राउ परेको केहि घण्टामै रिहा भए कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल
४वरिष्ठ नेता पौडेल गिरफ्तार परेपछि देउवाले दिए ओली सरकारलाई यस्तो कडा चेतावनी, के के भने ?
५थप १४९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
६कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गिरफ्तार, यस्ताे छ कारण
७कोरोना संक्रमण बढेपछि फेरी मंसिर २६ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, तर यी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध नलाग्ने
८आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
९पाल्पा र स्याङ्जाका दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु
१०कैलाली प्रहरी ह’त्या प्रकरण- ८ जना जेल चलान
११प्रचण्डदेखि डराए ओली, हाइकमाण्ड बैठकअघि नै चाले यस्तो कदम
१२अन्तत: ओलीले चाले यस्तो ठुलो कदम, एक्कासी यस्तो निर्णय गरेपछि नेता कार्यकर्ता नै चकित
एकै दिन तोलामा २ हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, अमेरिकी डलरको भाउ भने बढ्यो
काठमाडौं । साप्ताहिक कारोबारको तेस्रो दिन आज (मंगलबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलमा २ हजार रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला ७७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य मंगलबार तोलामा २ हजार रुपैयाँले घटेर ७५ हजार ५ सय कायम भएको छ ।
यस्तै, सोमबार प्रतितोला ७७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सूनको मूल्य मंगलबार ७५ हजार २ सय कायम भएको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्यमा समेत गिरावट आएको छ । सोमबार प्रतितोला ७ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार तोलामा ८० रुपैयाँ घटेर ७ सय १० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यस्तै सोमबार घटेको अमेरिकी डलर मंगलबार फेरि बढेको छ । अमेरिकी डलरसँगै खाडीका देशका मुद्रा पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार अमेरिकी डलर एककोे खरिददर ११८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकेको छ । हिजो डलर एककोे खरिददर ११७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको थियो ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । कतारी रियाल १ को खरिददर ३२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको थियो ।
यस्तै, आज ओमानी रियाल १ को खरिददर ३०८ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३०८ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकेको थियो । आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३२ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३२ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको थियो ।
मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ६५ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर २७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ६५ पैसा नै रहेको थियो । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७६पैसा तोकेको थियो ।
कुवेती दिनार १ को खरिददर ३८३ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३८१ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३८३ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको थियो । यस्तै आज बहराइन दिनार १ को खरिददर ३१३ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३१५ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३१२ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३१३ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको थियो ।
आफ्ना बरिष्ठ नेता समातिएपछि गगन थापाले गरे यस्तो कडा ट्वीट, ओलीलाई दिए कडा चेतवानी
वरिष्ठ नेता पौडेल गिरफ्तार परेपछि देउवाले दिए ओली सरकारलाई यस्तो कडा चेतावनी, के के भने ?
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गिरफ्तार, यस्ताे छ कारण
कैलाली प्रहरी ह’त्या प्रकरण- ८ जना जेल चलान
प्रचण्डदेखि डराए ओली, हाइकमाण्ड बैठकअघि नै चाले यस्तो कदम
किम जोङ उनले लगाए चीनले पठाएको कोरोनाविरुद्धकाे भ्याक्सिन